Ugljesa Djuric's Izindatshana ku Martech Zone |
Imibhalo nge Ugljesa Djuric
Ugi uyi-CEO noMsunguli we Okuqukethwe ihhashi i-ejensi yezentengiso lapho esiza izinkampani ze-B2B SaaS ukuthola izilinganiso ezisheshayo zeGoogle ngamasu wokuthengisa wokuqukethwe anamandla. Unentshisekelo yokukhulisa i-SaaS, ukuphuza ubhiya, ukuhambahamba nezinja zakhe ezi-2 zeDalmatia nokugibela amahhashi.
Izibonelo ezi-5 ze-Pop-up Pop-ups Ezizothuthukisa Amanani Wakho Wokuguqulwa
NgoMsombuluko, Julayi 20, 2020 NgoMsombuluko, Julayi 20, 2020 Ugljesa Djuric
Uma uqhuba ibhizinisi, uyazi ukuthi ukuveza izindlela ezintsha neziphumelela kakhulu zokwenza ngcono amazinga wokuguqulwa kungenye yemisebenzi ebaluleke kakhulu. Mhlawumbe awukuboni ngaleyo ndlela ekuqaleni, kepha ukuphuma kwe-pop-ups kungaba yisixazululo ngqo osifunayo. Kungani kunjalo nokuthi uzisebenzisa kanjani kusengaphambili, uzothola ngomzuzwana. Yini ama-Pop-up aphuma phambili? Kunezinhlobo eziningi ezahlukahlukene